Maamulka Puntland oo xusay sanad guuradiisii 16-aad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Xaflad lagu maamuusayo xuska sanad-guurada 16-aad ee ka soo wareegatay aasaaska maamulka Puntland oo ku beegan koowda August ayaa maanta lagu qabtay fagaare weyn oo ku yaalla magaalada Garoowe oo xarun u ah maamulkaas.
Isku soo bax ballaaran oo ka dhacday fagaaraha (Barxadda) ee Garoowe, ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sareysa Puntland oo ay ugu horeeyeen madaxweynaha C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweyne ku-xigeenka C/xakiim C/laahi Camey.
Sidoo kale, waxaa xuska sanad guurada 16-aad ee asaaskii Puntland kasoo qayb galay xubno ka tirsan goleyaasha wasiirrada iyo baarlammaanka, saraakiisha ciidamada iyo kumanaan qof oo ka socdey qaybaha kala duwan ee bulshada sida: ardeyda, ururada dhallinyarada, haweenka iyo shaqaalaha.
Cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo isugu jirey: Daraawiish, Ciidanka Badda iyo Boolis ayaa gaaddo ka ciyaar ku sameeyey Fagaaraha Barxadda, iyagoo sidoo kale salaan sharaf u saaray madaxweynaha iyo madaxdii kale ee madasha ku sugnaa.
Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa khudbad u jeediyay dad badan oo isugu yimid fagaaraha, kuwaas oo isugu jira ardayda, shaqaalaha iyo askarta maamulka, waxayna dadkaas qaarkood ku labbisanaayeen calanka maamulka.
Cabdiweli Maxamed Cali wuxuu mahadcelin u jeediyay dadkii ka dambeeyay dhismaha maamulka oo uu sheegay inay wax badan ka faa’iideen dadka ku nool deegaannadaas.
Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu sidoo kale maanta khudbad ka jeediyo xarunta baarlamaanka Puntland oo xaflad weyn lagu qaban doono. Maamulka Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1998-kii.